Kedu ihe bụ uzo atọ? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Linggba ígwè atọ gafere - Ntuziaka zuru ezu
Linggba ígwè atọ gafere - Ntuziaka zuru ezu
Kedu ihe bụ uzo atọ?
IheUzo ato ato- ihe omume igwe na-emeghi maka ndi obi n’adighi ike - n’eme kwa afo n’ebe a na Colorado. Malite na Evergreen - ụzọ ahụ na-eduzi ọtụtụ puku ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-aga 110 kilomita site na oke ugwu Rocky, tinyere ụfọdụ ndị egwuregwu kachasị sie ike n'ụwa.Mar 29 2021
(ụda olu dị nro) - Obere afọ gara aga, amalitere m inwe ihe mgbu aka ọzọ. Ya mere, n'ubu m, ebe a. Ọ dị ka eriri roba siri ike na ubu abụọ ma na-agbanye ogwe aka m.
Ọ bịara ma gafee. Ọ ga-ewe naanị sekọnd ole na ole. Echeghị m nke ukwuu.
N’izu na ọnwa ole na ole ọ bịara ka njọ. Ọ na-ewute ya ntakịrị - Lisa ekwughị ihe ọ bụla gbasara mgbaàmà ya. Ma n'ileghachi anya n'ile anya o nwere otutu ihe mgbaàmà ma echere m na ha bu mgbe nile n'ihi na m mere ihe ojoo ma obu nwee nsogbu na m, ma nke bu eziokwu bu na o na-agaghari na ogwe aka ya gafee, na-eme mkpesa banyere ufodu ihe mgbu, na-emetu ya aka ogologo oge.
Ikekwe otu ọnwa ma ọ bụ abụọ. - Ọ nọ na-ekwu na ogwe aka ya na-afụ ụfụ. Ma, ọ bụghị nke m.
N'ihi ya, m kpọrọ oku ma enwetaghị dọkịta m nkịtị, Ọ bụghị naanị dọkịta ọ bụla hụrụ m nwere ike, dọkịta a tụkwara aro ka m hụ onye ọkà mmụta gbasara ọrịa, nke juru m anya n'ihi na amaghị m ihe kpatara m ji hụ dọkịta na-ahụ maka ọrịa afọ n'ihi na m n'ezie chere na nke ahụ niile bụ - onye na-ahụ maka ọrịa obi Lisa na-enyo enyo na ihe dị njọ na obi ya na-aga n'ihu, wee gafee ụfọdụ nyocha nke mbido nke dugara na nyocha nke catheterization obi. N’oge etolitere etuto, ọ na - egbochi nnukwu akwara akwara ya. Ọ bụ n'ezie okenye mebiri emebi, mana o nwekwara ọtụtụ ihe egwu maka ọrịa akwara akaghi aka.
Ya mere dọkịta gị nwere obere ọnụ ụzọ maka nchoputa obi na onye nwere mgbaàmà pụrụ iche. O nweghi oche enyi enyi na obi ya. O nwere mgbaàmà na ogwe aka ya na ọbụna n'olu ya - Ya mere n'ụtụtụ a, ha bịara n'isi ụtụtụ chụpụ m wee sị ndị ezinụlọ m ọfụma na ọ siri ike ma m gbalịrị ijide ya ọnụ rue mgbe m banyere n'ime ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ, m cheta.
O wutere m nke ukwuu na ndị nọọsụ kwuru, sị, 'Gịnị bụ ihe ọjọọ?' M wee sị, 'Gịnị dị njọ?' 'Aga m aga ịwa ahụ obi!' 'Ọ bụ egwu n'ezie' ha wee sị, 'Echegbula. 'Ndị dọkịta a dị mma' na ha ga-elekọta gị nke ọma. 'Ma nke ahụ bụ ihe niile m ga-echeta ruo mgbe m tetere ụra ma nwee nnukwu obi mgbu.
Ọtụtụ obi na-afụ ụfụ maka imere gị ọtụtụ ihe. Ma ọ dị ịtụnanya na ọgwụ ọgbara ọhụrụ nwere ike ime. - Emere m uzo akwara na akwara ato.
Ugbu a, anyị na-eji akwara ozi akwara karịa akwara n'ihi na ọ dị ogologo oge. Ọtụtụ afọ gara aga, mgbe onye ọrịa ahụ wara ahụ wee mee nke ọma afọ ole na ole, anyị nwere obi ụtọ. Ma ugbu a, anyị na-arụ ọrụ nke ga-ewe ọtụtụ iri afọ.
Anyị mere ịwa ahụ ọtụtụ site na ịwa ahụ nke Lisa. Lisa bu ezigbo ndi umuaka ndi nwere nsogbu gbasara oria akwara. Ige ntị n'ahụ gị ka ị ghara iwepụ ihe mgbaàmà ndị ị na-enwetụbeghị mgbaàmà ndị a bụ ihe ọhụrụ.
Karịsịa ndị na-apụta n'oge mgbatị na ịtọghe nwayọ. Ikwesiri ige ahụ gị ntị ma hụ dọkịta gị ma kọọ ihe mgbaàmà ndị a ozugbo.- Echere m na ndụmọdụ m nye ụmụ nwanyị niile, n'agbanyeghị afọ ole ha dị, bụ ma ọ bụrụ na ọ dị gị ka ihe na-aga ntakịrị, hụ dọkịta.
Ọtụtụ ụmụ nwanyị na-eyigharị ya. Amaara m na ị na-arụ ọrụ, na-elekọta ezinụlọ, ị na-arụsi ọrụ ike. Dị ndụ, ịnweghị oge ị ga-eji gakwuru dọkịta.
ihe-eri tupu a ogologo igwe kwụ otu ebe
Aga m eme izu na-abịa, a ga m eme izu ọzọ. Mana ịmara, izu ụka na-abịa nwere ike ọgaghị abịa. (adụ egwu dị nro)
Ogologo oge ole ka ịnyịnya ígwè ịgba agba atọ?
Ihe nrịgo 16 nke elu ya bụ osisi na-adọrọ mmasị. Enwere m ike ma soro otu n'ime ndị enyi m gbafere ọsọ. Ọwereanyị ziri ezi na 1.5 awa site na Evergreen ruo nzuko ahụ, n'ihi ya, anyị nwere mmetụta dị mma banyere mmalite anyị nanọkwasi.Jul 17 2012 r.
Kedu ụbọchị bụ uzo atọ?
Ọnwa Nke Asatọ 21, 2021
Olee otu oke egwu uzo uzo ato?
Ozi ọma ahụ bụ na iri afọ ndị na-adịbeghị anya ahụwo ọdịda dị eluakwansogbu. Taa, ihe karịrị pasent 95 nke ndị na-arịa ọrịa obiuzoịwa ahụ adịghị enwetaakwansogbu, na ihe ize ndụ nke ọnwụ ozugbo usoro ahụ bụ naanị 1-2 pasent. g.
Nwere ike ibi afọ iri abụọ ịwachara ịwa ahụ?
Iri abụọ-afọlanarị site na afọ bụ 55%, 38%, 22%, na 11% maka afọ<50>70afọn'oge mbidoịwa ahụ. Vlanahụ naAfọ 20 ịwa ahụna ọbara mgbali elu bụ 27% na 41%, n'otu n'otu.
Kedu ihe ịga nke ọma nke ịwa ahụ ugboro atọ?
Site na iweghachi usoro ọbara na obi, CABG nwere ike ịkwụsị mgbaàmà ma nwee ike igbochi nkụchi obi. AkwarauzoA na-arụ ọrụ ọkara otu nde ugboro kwa afọ na mkpokọtaọnụọgụ mmerinke fọrọ nke nta 98 ​​percent.
Kedu otu esi esi agba ịnyịnya Triple Bypass?
Iheuzo atoa na-ahụta ka otu n'ime ihe ịma aka ịnyịnya ígwè otu ụbọchị na Colorado. Na-ekpuchi 120 kilomita na 10,000 + nke elu ele.Gbaa ịnyịnyanhọrọ ugbu a gụnyere ọwụwa anyanwụ ruo ọdịda anyanwụ, ọdịda anyanwụ ruo n’ọwụwa anyanwụ, yana okpukpu abụọMmaji Mmaji--zọ - na-ewere ụzọ abụọ n'ime ụbọchị abụọ. r.
Kedu ka ọ dị njọ ịwa ahụ ugboro atọ?
Ozi ọma ahụ bụ na iri afọ ndị na-adịbeghị anya ahụwo ọdịda dị eluakwansogbu. Taa, ihe karịrị pasent 95 nke ndị na-arịa ọrịa obiuzo ịwa ahụadịghị enwetaakwansogbu, na ihe egwu nke onwu ozigbousorobụ naanị 1-2 percent. g.
Ogologo oge ole ka ị nọ n'ụlọ ọgwụ mgbe ị gachara ụzọ atọ?
GịAga m achọkarị ịnọụlọ ọgwụmaka ihe dị ka ụbọchị 7mgbenwere akwara obiuzoaka (CABG) yabụ ndị ọrụ ahụike nwere ike leba anya na mgbake gị. N'oge a,gịenwere ike itinye ya na tubes dị iche iche, drips na drains na-enyegịtinyere mmiri mmiri, ma kwe ka ọbara na mmamịrị pụọ.
Kedu oge nkezi maka ịwa ahụ na-agabiga?
Ihepụtara afọnkeuzondị ọrịa bụ afọ 68.5 na 38% dị afọ 70 ma ọ bụ karịa. Onu ogugu ugwo uzo nke aka ekpe nke ndi mmadu na-acho CABS ruru 38%. Ihenkeziọnụ ọgụgụ nke uzo a rụrụ bụ 3.1.